शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल ! – Sandesh Press
शुक्र तुला राशिमा रहने, यी ४ राशि हुनेछन् मालामाल !
July 2, 2021 531
मंसिर १ गते ग्रह परिवर्तनको योग रहेको छ । शुक्रले कन्या राशिलाई छाडेर आफ्नो तुला राशिमा प्रवेश गर्दैछ ।
Prevयी ११ सपनाले मानिसको मृत्युको संकेत गर्छ